Nkọwa zuru ezu nke HTML 5 | Martech Zone
M mere gafee nke a ịrịba ngosi site M. Jackson Wilkinson na HTML 5 na CSS 3. Ọ bụ nyocha zuru ezu na mgbanwe ndị na-abịanụ na HTML na Cascading Style Sheets. O siri ike ikwere na HTML 4 karịrị afọ 10 ugbua!
Nchọgharị ihe nchọgharị maka HTML 5 ga-aga n'ihu ịkwanye ọtụtụ ngwa na ntanetị. O yiri ka ụbọchị ịzụ na ịwụnye ngwanrọ nke mgbasa ozi na-aghọ ihe gara aga. Ikike imepụta ma hapụ atụmatụ na ngwa dị egwu ga-adị mfe… site na usoro iheomume na ihe ntanetị.
Tags: cascading stylesheetsCSScss3HTMLhtml5
M nwere ike ịchọ ọkachamara n'ịntanetị Email Ọ bụrụ na…